२७ पत्नी र १५० छोराछोरीका कारण विश्वभर चर्चित यी पुरुष « Sagarmatha Daily News
२७ पत्नी र १५० छोराछोरीका कारण विश्वभर चर्चित यी पुरुष
काठमाडौँ । क्यानडाका एक व्यक्तिले २७ वटी श्रीमती र १ सय ५० छोराछोरीलाई एउटै घरमा राखेका छन् ।
सुन्दा नै यो कुरा अचम्म लाग्ने खालको छ । तर वास्तविकता हो । बेलायती पत्रिका ‘द सन’का अनुसार ६५ वर्षीय विन्स्टन ब्ल्याकमोर नामका यी व्यक्तिले २७ वटी श्रीमति बिवाह गरे । उनको पहिलो श्रीमतिबाट छोरी जन्मिएकी थिइन् उनको नाम मेरी जेन ब्ल्याकमोर हो । जसले आफ्ना बाबु विन्स्टनको जीवनको बारेमा अरुलाई यी कुराहरु बताएकी हुन् । मोर्मोन समुदायमा हुर्केकी मेरी भन्छिन् –उनको बाल्यकालमा उनीसँग भाइबहिनीको पूरै सेना थियो । जब उनी १४ वर्षकी थिइन् तब उनको बुवाको १२ वटी श्रीमती थिए ।
त्यतिबेला उनका ४० भाइबहिनी थिए । पछि उनको बुवाले अरु बिवाह गरे । पछि उनका भाइबहिनीको संख्या १ सय ५० पुग्यो ।मेरीकी आमांँग विन्स्टनले १८ वर्षको उमेरमा बिवाह गरेका थिए । मेरीकी आमा गर्भवती हुँदा विन्स्टनले दोस्रो बिवाह गरेका थिए । मेरी भन्छिन् “ घरमा महिलालाई नियम अलि कडा थियो मेकअप र स्टाइलिस कपाल काट्न प्रतिवन्ध लगाइएको थियो । हामीले कपडा लगाउँदा हाम्रो घाँटीदेखि नाडी र खुट्टासम्म छोप्नुपथ्र्यो । चिया, कफी, रक्सी र चुरोट सेवनमा प्रतिबन्ध थियो । घरमा टिभी, गित र उपन्यासहरुमा पनि प्रतिबन्ध थियो । फुर्सदको समय बाजा बजाएर, नाचेर र गीत भनेर समय बिताउने गरेका गर्नुपथ्र्यो ।”
नियम कडा भएपनि मेरीको बाल्यकाल सुखमा बित्यो । बहुबिवाह गैर कानूनी भएका कारण मेरी बाबुको कती श्रीमती छन् भनेर बाहिर अरु मानछेसँग भन्न हिच्किचाउँथिन् ।
सन् २०१७ मा मेरीको बाबु विरुद्ध बहुबिवाहको आरोप लाग्यो । त्यसपछि सन् २०१८ मा उनलाई दोसी ठहर गरियो र ६ महिना नजर बन्द गरियो । क्यानडामा यो पहिलो बहुबिवाहको सजाय हो । मेरीका अनुसार उनका बाबुले कानूनी रुपमा केवल उनकी आमासंग मात्रै बिवाह गरेका थिए । अरुसंग भने कानूनी रुपमा बिवाह गरेका होइनन् ।
म २० वर्षकी भए : म भर्जिन छैन, फेरि भर्जिन हुन के गर्नुपर्ला ?
म २० वर्षकी भएँ । मैले आफ्नो केटासाथीसँग धेरै पटक यौनसम्बन्ध राखेकी थिएँ । अहिले
‘भर्जिन’ पार्टनर चाहँदैनन् आजकालका युवायुवतीः अनुसन्धान
एक नयाँ शोधका अनुसार आजकालका युवायुवती ‘भर्जिन’ पार्टनरसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहँदैनन् । नटिंगम, ब्रिस्टल
भाइरल ‘डिजिटल भिकारी’, क्यूआर कोड देखाएर भिख माग्दै
एजेन्सी । भारतको मध्य प्रदेशस्थित छिन्दवाडाका हेमन्त सुर्यवंशीले हातमा डिजिटल कारोबारको बारकोड लिएर भिख मागिरहेका
५० पटक अन्तर्वार्तामा फेल, तर गुगलले दियो डेढ करोडको जागिर !
कडा मेहेनत र लगावकै कारण भारतमा एकजना युवतीले ठूलो उपलब्धि हासिल गरेकी छिन् । कुनै